के Ibex 35 6.100 को XNUMX,१०० बिन्दुमा भरपर्दो छ? | अर्थव्यवस्था वित्त
यस्तो देखिन्छ कि ,,१०० बिन्दुको स्तरले हाम्रो देश इक्वेक्स 6.100 35 को इक्विटीको छनौट सूचकांकमा जमीनको रूपमा काम गरिरहेको छ। विशेष गरी, तरलताको इन्जेक्शन पछि युरोपियन केन्द्रीय बैंक (ECB) जहाँ महामारी आपतकालीन खरीद कार्यक्रम (महामारीको आपतकालीन खरीद कार्यक्रम, अंग्रेजीमा) को नाम अन्तर्गत ECB ले १२०,००० मिलियन यूरोमा एक ठूलो प्याकेज थप गर्दछ जुन यो बिहिबार बिहीबार जारी गरिएको छ। यस बखत, यस्तो देखिन्छ कि यसले वित्तीय समयमा भुक्तान गरिरहेको छ, लगभग २% को विश्व मा शेयर बजार मा एक प्रशंसा संग।
महामारी आपतकालीन खरीद कार्यक्रम को लागी, लगानी को लागी, लगानीकर्ताहरुको हौसला शान्त छ। जे होस् हामीले त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा लिनुपर्नेछ जब सम्म केहि ट्रेडि session सत्रहरू बितिसके र यसको वास्तविक प्रभावहरू नदेखुन्जेल। जहाँ हालसालै यो देखिएको थियो कि इक्विटी बजार सबै दृष्टिकोणबाट टुक्रिएको थियो। अवतरणहरूमा कुनै सीमा छैन र ती सबै वित्तीय विश्लेषकहरूले Ibex 35 लाई 5.000,००० पोइन्ट स्तर मुनि देखे।
जे भए पनि नयाँ परिदृश्य, के स्पष्ट छ लगानी रणनीति साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूले फरक पार्नुपर्नेछ। जहाँ यी सबै प्रणालीहरू मा जान जाँदैछन् लामो समय बस्ने शर्त। यस अर्थमा, यस नयाँ परिदृश्यले सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको अल्पकालीन प्रयोगकर्ताहरू हुन् जसले शेयर बजारमा लगानीमा आफ्नो उद्देश्यहरू भिन्न गर्नुपर्नेछ। अर्कोतर्फ, यी वित्तीय एजेन्टहरूको एकमात्र सान्त्वना यो हो कि इक्विटी बजारहरू अन्ततः उनीहरूको जबरजस्ती गिरावटमा जमिनमा पुगेका छन्।
1 The,१०० बिन्दुहरूको प्रतिरोध गर्ने छ?
2 अर्को समर्थन गुमाउने जोखिम
3 युद्ध समाधानहरू
4 लगानीकर्ताहरुलाई ठूलो घाटा
5 दीर्घकालीन लगानी भनेको के हो?
The,१०० बिन्दुहरूको प्रतिरोध गर्ने छ?
हाम्रो देशको परिवर्तनशील आयको छनौट सूचकांकमा लगानीको चाबी यस मूल्यमा छ। यदि यो उल्लेखनीय स्तर उल्लlated्घन गरिएको छैन भने यो भन्न सकिन्छ कि यसले यस स्वास्थ्य र आर्थिक स in्कटमा यस भूमिकालाई ग्रहण गर्दैछ जुन यस ग्रहले अहिले दु: ख पाइरहेको छ। तसर्थ, यो वित्तीय बजार मा पहिलो खरीद गर्न को लागी समय हुनेछ। त्यस्तै एउटा कम मूल्यको फाइदा उठाउँदै जुन हामी केही हप्ता पहिले कल्पना गर्न सक्दैनौं। उदाहरण को लागी, को को कार्यहरु Banco Santander दुई यूरो मुनि र लगभग १००% को एक प्रशंसा सम्भावनाको साथ। र धेरै सेकुरिटीमा धेरै त्यस्तै परिस्थितिहरूको साथ जुन आईबेक्स। 100 बनाउँछ।
अर्कोतर्फ, यदि अन्तमा ,,१०० बिन्दुहरूले प्रतिरोध गरे भने, यो लामो अवधिको लागि शक्तिशाली लगानी पोर्टफोलियो निर्माण गर्ने समय हुनेछ। ऐतिहासिक मूल्यहरु संग कि यो परिदृश्य जुन भयानक अपभ्रंशको साथ उत्पन्न भएको हो कोरोनाभाइरस। धेरै वर्षको लागि एक धेरै स्थिर बचत बैंक मार्फत। किनभने प्रभावमा, केहि वित्तीय विश्लेषकहरू के सोच्दछन् कि शेयरमा यो मूल्य वर्षौं मा कायम छ। उनीहरूले पुनः प्राप्ति गर्न समय लिन सक्दछ, तर त्यहाँ केहि शंका छैन जुन उनीहरूको मूल्यहरु केहि बर्षहरुमा धितोको मूल्यहरु वर्तमानको भन्दा उच्च स्तरमा हुनेछ।
अर्को समर्थन गुमाउने जोखिम
अवश्य पनि, इक्विटी बजारका लागि सबैभन्दा खतरनाक कारक भनेको यो हो कि very,००० बिन्दुको नजीकबाट गठन भएको जमिन अबदेखि उल्लंघन गरिएको छ। किनभने यो अझ बढि डरलाग्दो को उत्पत्ति हुन सक्छ मन्दी त्यो छनौट इक्विटी सूचकांक लिन सक्दछ 5.000 बिन्दु भन्दा पनि कम। एक स्तर जुन पछिल्लो शताब्दी देखि देखिएको छैन, र के पैसा को दुनिया मा के भनिरहेको छ। उनीहरूको लगानी विभागहरूको मूल्य निर्धारण मा वास्तविक रक्तस्राव हुने थियो र निजी प्रयोगकर्ताहरु मा तरलता लिन सक्छ कि क्षण देखि व्यावहारिक शून्य हुन।
अर्कोतर्फ, यो तथ्य यो छ कि यो परिदृश्य जुन अहिले देखि सिर्जना गरिएको हो, यसले एक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अर्डर सिर्जना गर्न सक्छ जसले लगानी क्षेत्रलाई असर गर्छ र विशेष गरी ब्यागमा सेयरको खरीद र बिक्रीलाई असर गर्छ। यस दृष्टिकोणबाट, माटोलाई समर्थन गर्न आवश्यक छ जुन यी दिनहरूमा गठन भएको जस्तो देखिन्छ र त्यो अझै कार्यान्वयनमा छ, तर यो वर्तमान परिस्थितिमा यसको सामना गर्न सक्षम हुनेछ कि छैन भनेर निश्चित छैन। हामी यस बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा बाँचिरहेका छौं। कुरा गर्न को लागी कि यो एक स्तर हो जुन हामी यस सटीक क्षण बाट ध्यान दिनै पर्छ।
कुल मिलाएर, ECB बजारमा जान्छ यस वर्ष सार्वभौम debtण र कर्पोरेट betweenण बीच विभाजित १.१ ट्रिलियन यूरो भन्दा बढी हासिल गर्न। १.1,1 ट्रिलियन यूरो भन्दा बढि यदि तपाईले थप गर्नुभयो भने, थप, तपाईको बन्धनको पुन: निवेश जुन तपाईको पोर्टफोलियोमा छ, तर त्यो परिपक्वतामा पुग्छ। यस्तो उपाय जुन केहि महिना अगाडि पूर्ण रूपमा अकल्पनीय थियो र त्यो जर्मनीको राष्ट्रपति एन्जेला मार्केलको भनाइबाट अनुमोदन भएको छ। जसमा उनले भनेका छन् कि दोस्रो विश्वयुद्ध पछि उनको देशले त्यस्तो अवस्था देखेको थिएन। र यस कारणले युरोपेली केन्द्रीय बैंकको प्रमुखले घोषणा गरेको छ कि "गवर्निंग काउन्सिल यसको debtण खरीद कार्यक्रम र यसको संरचनाको आकार बढाउन पूर्ण रूपमा तयार छ, आवश्यक छ र आवश्यक नभएसम्म।"
यो बिर्सनु हुँदैन कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नयाँ परिदृश्यमा पनि परिवर्तन हुन सक्छ जुन यो अत्यन्त संक्रामक भाइरसको प्रवेशबाट उत्पन्न भएको हो। जहाँ एक क्षेत्र छ कि धेरै नराम्ररी बाहिर परिणत गर्न सक्छ, जस्तै एयरलाइन लाइनहरू, जसमध्ये केही दिवालिया हुन्छन् जबसम्म उनीहरू राज्य सहायता प्राप्त गर्दैनन्। को मामला मा जस्तै IAG जुन ट्रेडिंगबाट from यूरो नजिकैको प्रत्येक सेयरका लागि दुई यूरो तल झरेको छ। यी मानहरू हेर्ने तरीकामा पूर्ण परिवर्तनको साथ, आर्थिक रिकभरीको समयमा पनि। अवश्य पनि, स्थितिहरू खोल्न हुँदैन जबसम्म उनीहरू हामीलाई मोलतोल मूल्यमा ट्रेड गरेको देखिन्छ। तर यो वास्तविकता होइन कि तिनीहरूको व्यवसाय खाताहरूले यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना पछि संकेत गर्छ जसले इक्विटी बजारमा हामी सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई असर गरेको छ।
लगानीकर्ताहरुलाई ठूलो घाटा
न त हामी यो तथ्यलाई बिर्सन सक्छौं संघीय रिजर्वउनले, अन्य केन्द्रीय बैंकहरू मध्ये, यस प्रकारको सम्पत्ति अधिग्रहणको घोषणा गरिसकेका छन्, जसको बजार संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै ठूलो छ। किनकि यसको प्रभाव केवल पुरानो महाद्वीपको एम्बिरोमा सीमित हुने छैन, तर यो एक विश्वव्यापी आन्दोलन हुनेछ जुन अन्तमा हामी सबैलाई असर पार्नेछ, कुनै पनि प्रकारको बहिष्करण बिना। र निस्सन्देह यसले हाम्रो देशको इक्विटी बजारसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई असर गर्ने छ। अर्कोतर्फ, साना र मझौला लगानीकर्ताहरूको तथ्य यो भन्दा कम सत्य हो कि उनीहरूले आफ्नो ओहदाको समस्या समाधान गरे र आफ्नो पूँजीको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा गुमाए।
किनभने दिनको अन्त्यमा यो एक पूर्ण विकसित स्टक बजार क्र्यास हो। वित्तीय विश्लेषकहरूले यो इक्विटी बजारको वर्तमान परिदृश्यलाई कसरी परिभाषित गर्छन्। र यस्तै रूपमा यसले असाधारण प्रतिक्रियाहरू दिन आवश्यक छ जुन सामान्य परिदृश्यहरूमा अक्सर हुँदैन। किनभने यो भुल्दैन कि धेरै पैसा खतरामा छ र यस पक्षमा, सबै सम्भावित उपायहरू विचार गरिनु पर्छ वर्तमान लगानी परिदृश्यको घाटालाई सीमित गर्न जुन वास्तविकताले हामीलाई थोपेको छ।
दीर्घकालीन लगानी भनेको के हो?
लामो अवधिको लगानी भनेको त्यो हो जुन कम्तिमा १२ महिना भन्दा बढीको लागि विस्तार हुन्छ, यद्यपि प्रायः जसो क्षितिज प्राय अधिक लामो हुन्छ। कम्तिमा दुई वा तीन वर्षको वरिपरि र ती मामिलाहरूमा पुराना लगानीकर्ताहरूको साथ धेरै टाढा पार हुन्छ। तपाईको पोर्टफोलियोको साथ उच्च फिर्ताको पहिचान गर्न यी रिटेन्शन पिरियडहरूको बारेमा सोच्नु बाहेक अरू विकल्प छैन। उद्देश्य भनेको लामो क्षितिजको साथ बचतहरू सुरु गर्नु हो जुन आयहरू वर्षौं पछि बेवास्ता गर्दछन्, उदाहरणका लागि, अवकाशका लागि, किनभने केही लगानीकर्ताहरूले उनीहरूको सार्वजनिक निवृत्तिभरणको पूरक ठान्छन्।
हामीले स्थायित्वका यी सर्तहरूमा छोड्ने जोखिमहरू पनि मूल्या must्कन गर्नुपर्दछ। जे भए पनि, दीर्घकालीन पोर्टफोलियोको मुख्य सुविधाहरू के हुन्छ भनेर अन्तमा विचार गर्नु आवश्यक छ। खैर, यस अर्थमा, तिनीहरूको प्रोफाइल भनेको ती ब्यक्तिहरूको हुन् जसले बजारको अस्थिरतासँग सामना गर्न सक्दछन्। यस दृष्टिकोणबाट, यस वर्गका लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्नै पर्दछ र कुनै पनि मामलामा व्यावहारिक हुनुपर्दछ र वित्तीय सम्पत्तिहरूको यस वर्गका विज्ञद्वारा सबै समयमा सल्लाह दिइन्छ र जसले उनीहरूको तरलताको आवश्यकतालाई वर्तमान समयमा जस्तो विशिष्ट समयमा प्रतिक्रिया गर्दछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » के Ibex 35 6.100 को XNUMX,१०० बिन्दुमा भरपर्दो छ?
स्टक बजार नरसंहार मा राम्रो गरेको छ कि7स्टक